ICartel enkulu: i-Ecommerce yamaGcisa | Martech Zone
Eyasungulwa ngo-2005 ukunceda umququzeleli wabo ukuthengisa iimpahla zakhe zebhanki, I-Cartel enkulu ngoku likhaya lamagcisa azimeleyo angama-400,000 kwihlabathi liphela. Iqonga labo le-ecommerce lakhiwe ngokukodwa ukunceda abaqulunqi ukuba bafumane iimveliso zabo kwi-intanethi. Nantsi ividiyo evela komnye wabathengi babo, Phila ixesha elide, umyili wempahla.
I-Cartel enkulu unikezela ngezibonelelo kunye neempawu ezilandelayo:
Ukuseta ngokukhawuleza -Fumana ivenkile elula kwi-Intanethi kwimizuzu.
Kulula ukuyisebenzisa -Babonelela ngeqonga elilula ukusebenzisa.
Ingqondo yeshishini -Ukunika ingxelo kunye nolawulo lwe-odolo.
Ibhalwe -Ukulula kulungelelwaniso oluphambili ngaphandle kokufaka iikhowudi. Abasebenzisi banokukhetha imixholo eyenziwe kwangaphambili kwaye benze ngokulula imifanekiso, imibala kunye neefonti.
I-domain emiselweyo -Sebenzisa nasiphi na isizinda onakho ukunika ivenkile yakho i-URL yesiko.
Lawula iodolos - indawo yolawulo lweodolo kunye nokuqinisekisa ii-imeyile onokuthi uzenze ngokwezifiso.
Injini yokukhangela ilungiselelwe - iivenkile zilungiselelwe iinjini zokukhangela, ngokusekwe kwizindululo zikaGoogle.
Izibalo kunye nohlalutyo - jonga umsebenzi wevenkile kunye nokukhula kunye nezibalo zedashboard yexesha langempela kunye nokudityaniswa kukaGoogle.
Iikhowudi zezaphulelo Iikhowudi zesaphulelo zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthengisa iimveliso ezintsha, ukukhuthaza ivenkile yakho, kunye nokuvuza abathengi abathembekileyo.
Imveliso yeDividenti - thengisa ubugcisa bedijithali, umculo, iividiyo, iifonti, iifoto, ii-eBooks, kunye nezinye iimveliso ezinokukhutshelwa kunye nenkonzo yethu yokudibanisa udade, Pulley.
Thengisa kuFacebook -Yongeza ivenkile yakho kulo naliphi na iphepha le-Facebook kwaye uqhagamshele abalandeli bakho kwiimveliso zakho kusetyenziswa i-Facebook ngokudibeneyo.
Ukuphuma kwefowuni - thengisa iimpahla zakho ngqo kwi-iPhone yakho kunye Insiza enkulu yeCartel.
tags: inqwelo enkuluIvenkile yokukhuphela kwidijithalieCommerceecommerce yamagcisapulleythengisa ubugcisa kwi-Intanethithengisa ifashoni kwi-intanethi